Control Blood Pressure - Zomi Adventist Innkuan
သွေးတိုး ရောဂါ ထိန်းသိမ်း နည်း(၇)ချက်
သွေးတိုး ရောဂါသည် တိတ်တစ်စိတ် လာ၍ လူကို သတ်နိုင်သော ရောဂါကြီး တစ်ခု ဖြစ်သော် လည်း ကမ္ဘာ့ လူသားများ အားလုံး သွေးတိုးရောဂါ ရှိမှန်း မသိပဲ ရုတ်တရက် ရုတ်တရက် အသတ်ခံခဲ့ကြရ သည့် တိတ်တစိတ် လူသတ်သမားဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေရ သော ရောဂါကြီး၊ မဆန်းသော ရောဂါ ပင်ဖြစ်သည်။ များသော အားဖြင့် အစား အသောက်၊ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်ရာမှ ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ် ၍သေဆုံးခြင်း တို့ကြောင့် အဖြစ်များ အသေများသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အသက် အရွယ်တွင်မဆို မိမိသွေးတိုးရောဂါ ရှိမရှိ ဂရုစိုက် ဆရာဝန်နှင့် စစ်ဆေးကာ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကာကွယ် သင့်သည်။ မိမိခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း သွေးဖိအား Blood Pressure အားလျှော့ချရန် နည်းလမ်း (၇) လမ်းကို ဖော်ပြပေးပါမည်။
မနက်စောစော အိပ်ယာထပါက နေမပူခင် ၁၅ မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက် ပေးရပါသည်။ အမှန်တကယ် တော့ Exercise ကို ပြင်းထန်စွာ လုပ်ရန်မလိုအပ် ချေ။ သင်၏ Blood Pressure ကို Exercise ပြင်းထန်စွာလုပ်ခြင်းဖြင့် ပို၍သွေးတိုးစေသည်။ Japan သုတေသီများက လူနာ ၁၆၈ဦးအား စမ်းသပ်ချက်အရ တစ်ပတ်လျှင် မိနစ် ၃၀ မှ ၉၀ အတွင်းသာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မပြင်းထန်သော Exercise လုပ်ခြင်းပြုလုပ်သော လူနာများ သည် တစ်ပတ်လျှင် မိနစ် ၉၀ ထက်ပို၍ လမ်းလျှောက်သော လူနာများထက် ပို၍ သွေးပေါင်ချိန်လျော့ နည်းစွာ ထိန်းထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ “တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး” စကားပုံ ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရ ပေသည်။
ဆရာဝန်ပေးထားသောဆေး သောက်ဖို့မမေ့ရန် သင်၏ ပြက္ခဒိန်တွင် နေ့စဉ်အမှတ်အသား လုပ်ထား ပြီး မှန်မှန်ဆေးသောက်ပါ။ နေ့တစ်နေ့၏ ၂၅ ရာခိုင် နှုန်းအချိန် (ဥပမာ တစ်နေ့ ၆ နာရီ) သည် သွေးပေါင် ချိန်များနေပါက သင်ဆေးသောက်ရန် မေ့နေကြောင်း သိရှိရမည်။ သွေးတိုးရာဂါ ဖြစ်ပြီး သွားပါက သွေး ပေါင်ချိန်ထိန်းညှိဆေးကို မိမိဘဝတစ်လျှောက်လုံး သောက်သွားရ မည်ဖြစ်ရာ ဆေးဖြတ်၍ မရနိုင်တော့ ပါ။ ဆေးသောက်ရန် မမေ့သင့်ပဲ မှန်မှန် သောက်ပေး မှသာ သင်၏ Blood Pressure ကို Normal Range အတွင်း ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မိမိအိမ်၌ Home Blood Pressure Kit ကို သိမ်းထားသင့်သည်။ မိမိအိမ်၌ ပုံမှန်မိမိ၏ သွေးဖိ အားကို တိုင်းတာ၍မှတ်တမ်းတင်ကြည့်ရှုမှတ်သား ထားခြင်းသည် ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ပြီးတိုင်းတာခြင်းမှ ရသော အဖြေထက်ပို၍ အကျိုးရှိသည်ကိုတွေ့ရ ကြောင်း U.S.A မှ သုတေသီများက ဆိုသည်။ အမေရိကန် သုတေသီများက ဆိုရာတွင်ဆရာဝန်၏ ဆေးခန်းတွင် Blood Pressure တိုင်းတာရာတွင် လူနာများ၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ Blood Pressure မြင့်မား နေပြီး အိမ်တွင် သွေးတိုးမရှိဘဲ ကျနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိသဖြင့် ထို Result အရ ဆေးပေး မိလျှင်သွေးပိုကျကာ အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ဆရာဝန်နှင့် တွေ့စဉ် စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် သွေးတိုးတတ်ပြီး ၎င်းကို ”White-Coat Hypertension” ဟုခေါ်သည်။ အလားတူပင်လူနာများ၏ (၉) ရာခိုင်နှုန်း မှာ ဆရာဝန်၏ ဆေးခန်းတွင် တိုင်းတာစဉ် သွေးကျနေ သော်လည်း အိမ်တွင် သွေးတိုးနေတတ်သည်ကိုလည်း သိရှိရသည်။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်က ဥရောပ ဆရာဝန်များ သမ္မဂ သုတေသန အစည်းအဝေးတွင် အိမ်တွင် မိမိ၏ သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်စစ်ထားသော လူနာများသည် ဆရာဝန်၏ ဆေးခန်းရောကမှ သွေးတိုင်း သော လူနာများထက် ပို၍ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိနိုင် ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၀ဝ အောက်မျှသာ ရှိသော “Home Blood Pressure Kit” ကို အိမ်၌ ဆောင်ထားသင့်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
Omega -3 Fatty Acids များ ပါဝင်သော အမျှင်ဓာတ်များသော အစား အစာများစားပေးခြင်း၊ အသီးအနှံများများ စားပေးခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံမှ ထုတ်လုပ် သော အစားအစာ များများ စားပေးခြင်းသည် သွေးဖိအား လျှော့ချ ပေးသည်။ အမြှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများ သော အစားအစာများတွင် Flaxseed များစွာ ပါဝင်ပြီး ၎င်းဆေး အား ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းခန့် သင်စားမည်။ ဒိန်ချဉ်၊ ရေခဲမုန့်၊ Spaghetti, Sauce နှင့် တခြားအစား အစာများနှင့် ရောနှောထားသော သွေးဖိအား ကျအောင်ထိနူ်းပေးနိုင်သည်။ အထူး သဖြင့် နှလုံးရောဂါသည်များတွင် တွေ့ရသော Systolic Blood Pressure ကို ကျအောင် စွမ်း ဆောင်နိုင်သည်။
ကော်ဖီ သောက်သုံးခြင်းကို လျော့ချပြီး သွေးတိုး နှလုံးရှိသောသူများအနေဖြင့် ကောဖီသောက်ခြင်းဖြင့် ပို၍ရောဂါ တိုးစေသည်။ ကော်ဖီအစား ွှနေ ကို အစားထိုး၍ သောက်သုံးရန် သုတေသီ များက အကြံပြုထားသည်။ လက်ဖက် ရည် (နို့ဆီသကြားမပါ) ကြမ်းကို ပိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် သွေးတိုးရောဂါ ရှင်များ၏ Systolic Blood Pressure (အပေါ်သွေး) ၂ မှတ်မှ ကြာစေပြီး Diastolic Blood Pressure အား One Point မှ ကျဆင်းစေသည်ကို တွေ့ရှိရ သည်ဟု သုတေသီများကဆိုခဲ့ပြီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ကို တနေ့လေးခွက်ထက်ပိုသောက်လျှင်တော့ အဆိုပါ ကျေးဇူးများ မရနိုင်တော့ချေ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် များစွာရနိုင်သော Avocados ထောပတ်သီးတွင် Blood Pressure ကို ကျစေသော Potassium ဓာတ် ပိုမိုပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် Potassium ဓာတ် တစ်နေ့ (၄.၅) ဂရမ် လိုအပ်ပြီး အမေရိ ကန် သုတေသီများ၏ သုတေသန လုပ်ချက်များအရ သိရှိရပြီး ၎င်း Postassium ဓာတ်က သွေးဖိအား ကျဆင်းစေ ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အဆိုပါဓာတ်သည် ထောပတ် သီး သာမကဘဲ တခြားသော အသီးအနှံများ ဟင်း သီးဟင်းရွက်များနှင့် ငှက်ပျောသီးတွင်လည်း ပါရှိ ပေသည်။
ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ခေတ်စားလာ သော Cocoa ပါဝင်သော Dark Chocolate ကို ပုံမှန်စားသုံးနိုင်ပါက သင်၏သွေးဖိအားကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်းတော့ ရှိရသည်။ ချောကလက်ဟု ဆိုရာတွင် နွားနို့နှင့် သကြားများစွာပါဝင် သော ချောက လက်ကို မဆို လိုပဲ ဃသခသေ တစ်မျိုးတည်းဖြင့် သီးသန့်ပြုလုပ်ထား သော ခါးသော အရသာ ရှိသည့် ညိုမဲရောင်ရှိချောက လက်ကို ဆိုလိုသည်။ Dark Chocolate သည် Flavonoids ဓာတ်များပါဝင်ပြီး သင်၏သွေးကြော များ ကိုပျော့ပြောင်း စေပြီး မာကြော သောသွေး ကြောများကြောင့် ဖြစ်ပွားရသော သွေးဖိအားမြင့်မား မှုကို လျော့ချပေးသည်။ ပနားမားရှိ အင်ဒီးယန်း လူမျိုးများမှ ဆားငန်သော အစားအစာများ သော် လည်း Dark Chocolate များများစားပေးခြင်းဖြင့် သွေးဖိအားကို ပုံမှန်ဖြစ်နေစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးထား နိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
အမေရိကန် ဆေးပညာ သုတေသီများ၏ တွေ့ ရှိချက်အရ တစ်နေ့လျှင် Dark Choclolate (၃) အောင်စမျှ စားပေးခြင်းဖြင့် “Isolated Systolic Hypertension” ရောဂါဖြင့် အသက်ရှင် နေသူလူကြီး များတွင် (အပေါ်သွေးအ တက်များသောသွေးတိုး ရောဂါရှင်များ) ပေါ်သွေးကို ကျဆင်းစေရန် စွမ်း ဆောင်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရသည်။ “Flavonoids” ဓာတ်ကို လက်ဖက်ရည်ကြမ်း “Tea” နှင့် Wine များတွင်လည်းကောင်း၊ သီးနှံမျိုးစုံနှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ တွင်လည်း ပါဝင်ပေသည်။ သွေးတိုး ရောဂါရှင်များ သွေးမတက်အောင် ထိန်းသိမ်းနေ တတ်ရန်ရည်ရွယ်လျက်။
သွေးတိုးရောဂါဟာ ရောဂါလက္ခဏာ ထူးခြားသိသာမှုသိပ်မရှိတဲ့အတွက် တိတ်တဆိတ် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အသံတိတ်လူသတ်သမား (silent killer) တစ်ယောက်လိုပါပဲ။ သွေးတိုးရောဂါဟာ heart attack၊ kidney failure (ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာမျိုး)ကို ဖြစ်စေနိုင်သလို မျက်စိကွယ်ခြင်းနဲ့ အသည်းရောဂါနဲ့ တခြား အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ရောဂါတော်တော်များများကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ လာခြင်းမကောင်းသော ရောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
See also Banghangin Mawhna Om Kiphal Hiam? (part 1)
သွေးတိုးရောဂါရဲ့ အခြေခံ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
၃။ မအီမသာ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေမှာတော့
သွေးတိုးရောဂါကို ဆေးဝါးမပါဘဲ ထိန်းချုပ်ခြင်း ၁၀နည်း
သွေးတိုးရောဂါအတွက် ဆေးဝါးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်သလို ဆေးဝါးမပါဘဲ သွေးတိုးထိန်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့နေထိူင်စားသောက်မှုပုံစံ(lifestyle) ကို ပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆေးအများကြီးသောက်ရတဲ့သူတွေဟာ ဆေးကို လျှော့သောက်လာနိုင်မယ်။ ဆေးနည်းနည်းသောက်နေရသူတွေဟာ ဆေးသောက်စရာမလိုတော့ဘဲဖြစ်လာမယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးဝါးတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို လျှော့ချလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆေးဝါးကုသမှုဟာ သွေးတိုးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အရေးအပါဆုံး အချက်လို့မယူဆထားသင့်ပါဘူး။ မိမိရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှု(lifestyle) ဟာလည်း သွေးတိုးရောဂါ ကုသရေးအတွက် အင်မတန်အရေးပါပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် သွေးတိုးရောဂါ အတွက် ဆေးကုသမှုလိုအပ်ချက်ကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်၊ အနုစားအဆင့်တွေမှာဆိုရင် ဆေးကုသမှုလုံးဝမလိုအပ်တော့အောင် လျှော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ lifestyle ၁၀ခုက ဒီလိုပါ။၁။ ပေါင်ပိုတွေကိုလျှော့ချပြီး ဝမ်းဗိုက်အဆီစုပုံမှုတွေကို သတိပြုပါ
လူက အလေးချိန်များလာတာနဲ့အမျှ သွေးဖိအားတိုးလာလေ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ ပေါင်လောက်လျော့သွားရုံနဲ့ သွေးဖိအားကို သိသိသာသာ လျော့စေပါတယ်။ ယေဘုယျပြောရရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန် နည်းသွားရင် သွေးဖိအားနည်းပြီး သွေးဖိအား အတွက်ဆေးကုသမှုတွေကို ပိုပြီး ထိရောက်သွားစေနိုင်တယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူး။ ခါးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ အဆီစုပုံမှု၊ ဝမ်းဗိုက်အဆီစုံပုံမှုတွေကိုလည်း ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရပါတယ်။ ခါးနားမှာ အလေးချိန်သိပ်များနေရင် သွေးတိုးဖို့ အန္တရာယ် အနေအထားပါပဲ။ အထူသဖြင့် ခါးက အမျိုးသားတွေမှာ လက်မ ၄၀ ထက်ပိုလာပြီဆိုရင် သတိထားပြီးလျှော့ချဖို့လိုနေပါပြီ။ အမျိုးသမီးတွေမှာဆို ၃၅ လက်မထက်မပိုသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာရှက အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ခါး ၃၆ ဆိုတာ အန္တရာယ် အမှတ်အသားပါပဲ။ အာရှသူတွေအတွက်တော့ ခါး ၃၂ ဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ပါပဲ။
ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဘယ်နှစ်လအတွင်းမှာ ဘယ်လောက် အလေးချိန်လျော့ချမယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဟာ သင့်အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာဘယ်လိုစားပြီး ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးက သင့်တော်သလဲဆိုတာကို အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ညဉ့်နက်မှ သရေစာစားတာမျိုးနဲ့ တခါတည်း အများကြီးစားတာမျိုးကိုတော့ ထိထိရောက်ရောက် ရှောင်ကြဉ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ရပါမယ်။ အနည်းဆုံး တပါတ်မှာ သုံးလေးကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်မှာ မိနစ် ၃၀ ကနေ ၁ နာရီလောက်အထိ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ သင့် သွေးဖိအားကို ၄ မီလီမီတာ မာကျူရီ ကနေ ၉ မီလီမီတာ မာကျူရီ ကြားကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကြာကြာမစောင့်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ တကယ်လို့သင်ဟာ ပုံမှန် အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသိသိသာသာ အကျိုးရနိုင်ပါတယ်။
သွေးတိုးဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသူတွေဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်ပြီး၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေကလည်း လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်မယ်ရင် သွေးတိုးကို စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပဲ ဆယ်မိနစ် ဆက်တိုက်လျှောက် ခဏနား၊ ဆယ်မိနစ်ဆက်လျှောက်နဲ့ သက်သက်သာသာလုပ်သွားတာတောင်မှ သွေးတိုးရောဂါအတွက် ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေလို နားရက်မှာလည်း မပျက်မကွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လေးလုပ်သွားတာက ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ မိမိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပဲ နိုင်သလောက်စလုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်။
အခု တကမ္ဘာလုံးမှာ အစိမ်းရောင် တွေ များများစားလာကြပါပြီ။ အသားကိုလျော့စားပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုများများစားတာမျိုးပါ။ အသီးအအနှံပေါတဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ အသီးအနှံကို များများစားပေးဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါအတွက် ထိရောက်တဲ့နည်းတစ်ခုပါပဲ။ အသီးအနှံတွေကိုလည်း ပြုပြင်ထားတဲ့ အသီး အကြီးကြီးတွေစားတာက တခြားမလိုလားအပ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် သဘာဝကျတဲ့ အသီးအနှံ နဲ့ ပိုးသတ်ဆေးသိပ်မသုံးထားတဲ့ အရွက်တွေကိုစားသုံးသင့်ပါတယ်။
• တနေ့တနေ့စားသောက်တာတွေကို မှတ်စုလေးလုပ်ထားပါ။
• ပိုတက်စ်စီယမ်တွေကို ပိုတိုးပြီးစားပေးပါ။ အမေရိကန်တွေဟာ ဆိုဒီယမ်ပါတဲ့ အစာတွေစားတာများကြလို့ သွေးပိုတိုးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသီးအနံတွေ အရွက်တွေလို ပိုတက်စ်စီယမ်များတဲ့ အစားအစာတွေပိုစားပေးကြပါတယ်။
• အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စားသုံးသူဖြစ်ပါ။ ဈေးသွားမဝယ်ခင် ဝယ်သင့်တာတွေမဝယ်မိဖို့ စာရင်းနဲ့ပဲသွားပါ။ စားသမျှတွေဟာ ကျန်းမာဖို့အတွက်စားပါ။ စားကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးမရှိတာ၊ ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်နိုင်တာတွေကို မစားမိအောင်သတိထားပါ။
စားသောက်ပူံစနစ်ဟာ တစ်သက်လုံးစားသောက်သွားဖို့ စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေကိုစားသောက်ဖြစ်အောင် သတိထားပြီးလုပ်သွားကြရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကို အားလုံးဖြတ်ပစ်လိုက်ဖို့တော့မလိုပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေတဲ့ အချိုးအဆနဲ့နည်းနည်းစီ ပြင်သွားရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် အချိုတွေ အဆီများတာတွေကို မစားမိအောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဆီမသန့်နိုင်တဲ့အစာတွေကိုလည်း သတိထားပြီးရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
စားတဲ့အစားအသောက်တွေမှာ ဆိုဒီယမ်မပါတာ နည်းနည်းလျော့စားလိုက်ရုံနဲ့ သွေးဖိအားကို ၂ မီလီမီတာမာကျူရီကနေ ၈ မီလီမီတာမာကျူရီကြား လျော့နည်းစေပါတယ်။ များများလျော့စားရင်ပိုပြီးသိသိသာသာ သွေးတိုးကျပါတယ်။
• ဆိုဒီယမ် စားသောက်မှုကို တွက်ပါ။ အစားအသောက် ဒိုင်ယာရီလေးလုပ်ထားပြီး တနေ့မှာ ဆိုဒီယမ် ဘယ်လောက်စားသလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါ။ ကျန်းမာတဲ့ လူငယ်တွေဟာ တစ်နေ့မှာ ဆိုဒီယမ် ၁၅၀၀ မီလီဂရမ် ကနေ ၂၄၀၀ မီလီဂရမ် အထိ လိုအပ်ပါတယ်။ အသက် ငါးဆယ်အရွယ် သွေးတိုးဝေဒနာရှင်အတွက်ကတော့ ၁၅၀၀ အောက်မှာပဲ အမြဲရှိသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီထက်ပိုလာမယ်ဆိုရင် သွေးတိုးနဲ့ဆက်စပ်ရောဂါတွေကို ပိုပြီး အခြေအနေဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
• အစားအစာတွေရဲ့တံဆိပ်တွေကိုဖတ်ပါ။ အစားအစာတွေဝယ်တဲ့အခါ ဆိုဒီယမ် ဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာကို မဝယ်ခင်မှာသေချာရွေးချယ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆိုဒီယမ် လျော့ထားတာတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်လိုမျိုးမှာတောင် ဆိုဒီယမ်များနေလား သတိထားပြီးကြည့်ပါ။
• အသင့်စားအစာတွေကို လျော့စားပါ။ အာလူးကြော်၊ အေးခဲထားတဲ့ ညစာတွေ၊ အသားဗူးတွေ၊ အသင့်စားနေ့လည်စာတွေ မှာ ဆိုဒီယမ်များတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုလျော့စားဖို့လိုပါတယ်။
• ဆားထပ်မထည့်နဲ့။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းဟာ ဆိုဒီယမ် ၂၃၀၀ မီလီဂရမ်ပါပါတယ်။ ဆားအစားတခြား ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ၊ မဆလာတွေသုံးပါ။ တကယ်လို့ ဆားများများစားတာကို အကျင့်ပါနေရင် တဖြည်းဖြည်းလျော့ချပါ။
• ပိုပြီးလတ်ဆတ်တဲ့အစာတွေကိုစားပါ။ အသီးအနှံတွေနဲ့ အသင့်စားမဟုတ်တဲ့ ပဲတွေ ကိုစားပေးပါ။ အဲဒီအစားတွေမှာ ဆိုဒီယမ်နည်းနည်းပဲပါပါတယ်။
• ရေကိုစစ်ဆေးပါ။ အိမ်မှာ သုံးစွဲနေတဲ့ ရေမှာ ဆိုဒီယမ် ဘယ်လောက်ပါလဲသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ရေမှာပါတဲ့ ဆိုဒီယမ်ကိုလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်မှသာ တနေ့မှာ ဆိုဒီယမ် ဘယ်လောက် သုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးတိတိကျကျသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အရက်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းရော အဆိုးပါဖြစ်စေပါတယ်။ အရက်အနည်းငယ်သောက်သုံးခြင်းဟာ နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း (heart attack) ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို သွေးဖိအားကို ၂.၅ မီလီလီတာ မာကျူရီကနေ ၄ မီလီမီတာ မာကျူရီအထိ လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရက်များများသောက်တာကတော့ သွေးတိုးရောဂါကို ပိုပြီးဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ အရက်မသောက်ပဲမနေနိုင်ရင်တော့ လျော့သောက်ပါ။ အလွန်အကျွံမသောက်မိအောင်သတိထားပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရဲ့တခြားဆိုးကျိုးတွေကို ထည့်မတွက်ရင်တောင် ဆေးရွက်မှာပါတဲ့ နီကိုတင်းဟာ ဆေးလိပ်သောက်ပြီးနောက်တစ်နာရီအထိ သွေးဖိအားကို ၁၀ မီလီမီတာ မာကျူရီ တက်စေပါတယ်။ တစ်နေကုန်သောက်နေမယ်ဆိုရင် သွေးဖိအားဟာ တစ်နေကုန်မြင့်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်တာကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူတွေနားမှာ မနေဖြစ်အောင်လည်းသတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကဖိန်းဟာ သွေးတိုးရောဂါအတွက် အငြင်းပွားဖွယ်အနေအထားမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ တစ်ချို့လူတွေမှာ ကော်ဖီသောက်လို့ ကဖိန်းဓာတ်မြင့်လာတဲ့အခါ သွေးတိုးပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီကို အလွန်အကျွံမသောက်ဖို့နဲ့ သိပ်ပြင်းတဲ့ကော်ဖီတွေကို ရှောင်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းပါတယ်။ ကော်ဖီအမှုန့်တွေဟာ ပြုပြင်ထားတဲ့ကော်ဖီတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အရသာလည်းပိုကောင်းသလို ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းပိုညီညွတ်ပါတယ်။ သွေးတိုးဝေဒနာရှင်တွေ ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါ ကဖိန်းဓာတ် ၂၀၀ မီလီဂရမ်(ကော်ဖီနှစ်ခွက်စာ) ထက်မပိုဖို့ဂရုစိုက်ပါ။
ကဖိန်းဓာတ်လိုပဲ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ သွေးတိုးရဲ့ဆက်နွယ်မှုဟာ အတိအကျ အထောက်အထားမပြနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်သောကဟာ သွေးဖိအားကိုခဏတော့ မြင့်စေတတ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကို မလျော့ချခင် ဘယ်လိုနေရာမှာ ကိုယ်စိတ်ဖိစီးတတ်သလဲဆိုတာကို အတိအကျလေ့လာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအချိန်မှာသိသာသလဲဆိုတာကိုသေချာကိုမှတ်သားထားရပါမယ်။ စိတ်ကိုသက်သက်သာသာ အမြဲထားတတ်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ စိတ်ကို ဖြတ်လတ်စေတဲ့ အပြုအမူမျိုးနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးမျိုး(သို့) အားကစားတမျိုးမျိုးကို ပုံမှန်လုပ်သင့်ပါတယ်။ တရားနာခြင်း၊ တရားရှုမှတ်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်စဉ်၊ ထိုက်ချိ ၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း ၊ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း အစရှိတာတွေဟာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် အထောက်အကူကောင်းတွေပါပဲ။
စိတ်အေးချမ်းအောင်နေပြီး သောကဖြစ်တဲ့အခါ အကြံဉာဏ်ပေးတတ်တဲ့ နားလည်စာနာတဲ့ မိတ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းမနေဘဲ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုဟာ သက်သာဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေဟာ မကြာမကြာ သွေးပေါင်ချိန်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ လစဉ် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း ကိုယ်ခန္ဓာကို သတိထားပြီး အပြောင်းအလဲတွေဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာကို သိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သွေးတိုးရောဂါကုသမှုကို ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ပေါ့ဆလို့မရပါဘူး။ ဆေးကိုလည်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပုံမှန် သောက်သင့်ပါတယ်။
မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာရာမှာ အထောက်အကူကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်ကို အားပေးနိုင်တယ်။ ဆရာဝန်ဆီပို့ပေးနိုင်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအတူလိုက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကျဖို့အတွက် တတ်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီနိုင်တယ်။
မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အချိန်ပေးပြီးစကားပြောပါ။ သွေးတိုးရောဂါအကြောင်းကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြပါ။ သူတို့တွေလည်းနားလည်တဲ့အခါ သူတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိစေသလို ကိုယ့်အတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါကို တွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို အတူတကွပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကိုလည်း အတူတကွ တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
လူအများစု ဟာ သွေးတိုးရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို မလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ပဲ သွေးတိုးရောဂါဆိုတဲ့ အသံတိတ်လူသတ်သမားဟာ ၂၁ ရာစုရဲ့ ရောဂါတော်တော်များများမှာ ဆက်စပ်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျန်းမာရေးတဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံလေး ၁၀ ခုလောက်ကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာသွားရုံနဲ့ သွေးတိုးရောဂါကို အောင်မြင်စွာခုခံတွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit = ကိုဖေအောင်
See also ဂေါ်ဖီကို ဖျော်ရည်လုပ်ပြီးသောက်ရင် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
Prev post 03. Tawlngak Dingin Ngiimlo
Next post 4. Pound 90 Kiam Losing 90 Pounds